လုံးကြီးတင်ကို ဂဏန်းပေါ်တင်တာ၊ ဂဏန်းကို မောက်ချတပ်တာ (ယူနီကုတ်မှာ ပြဿနာ) — MYSTERY ZILLION
March 2012 edited March 2012 in Daily Life
a) Any Number followed by MYANMAR_VOWEL_SIGN_TALL_I (U102D) can't render correctly.
b) Any Number followed by MYANMAR_VOWEL_SIGN_AA (U102B) can't render correctly.
မကြာခင် မြန်မာ unicode ဆိုတာဘာလဲလို့သိရမယ်တဲ့။ ဇော်ဂျီနဲ့ အခြား fonts တွေနဲ့ရေးထားတာတွေပြန်ပြင်ရမယ်လို့ကြားမိတယ်။ ဟုတ်ပါသကော....
ကာလာတီဗွီပေါ်လာရင် အဖြူအမည်းတီဗွီကို အလိုလိုအသုံးလျော့သွားမှာပါ။